Izinsizakalo Zokusekela - Isikhungo Sezemfundo Yezilimi Ezimbili
Ikhaya IsiNgisi Sababaleki, Ama-Asyl, SIV, kanye Nezisulu ZokushushumbisaIzinsizakalo Zokusekela
Njengokufika okusha e-United States, ukufunda isiNgisi kungakusiza ekuxhumeni ekhaya lakho elisha kanye nomphakathi wakho omusha. Umgomo wethu e-BEI ukukusiza ukufezekisa iphupho lakho laseMelika futhi unqobe noma yiziphi izithiyo ngokunikeza elinye lamathuluzi anamandla kakhulu - ukuxhumana. Sikufundisa ngesiNgisi osidingayo emphakathini nomsebenzi. Uma umbono wokuthatha ikilasi lesiNgisi ubonakala ungafinyeleleki, cabanga ngezinsizakalo zokusekelwa esikunikeza ukukusiza ukufeza izinhloso zakho.
Ukuthola umsebenzi kungakucindezela, ikakhulukazi uma umusha eMelika. Umeluleki Wethu Wabafundi ulapha ukukusiza futhi akusize ugcwalise izinyathelo zokugcwalisa indlela yakho yomsebenzi. Kwesinye isikhathi lokhu kusho ukuqhubeka nempilo yakho ende lapha e-US. Ngezinye izikhathi, kusho ukuthola inhloso entsha yomsebenzi. Izinsizakalo zethu Zokweluleka Ngezeluleko zingasiza ekuboneni amathuba okuqeqeshwa, ukuqhubeka kokubhala, amakilasi wolimi lwesiNgisi, amakilasi wamakhono emisebenzi, nokuningi!
Ukuhumusha / Ukuhumusha
I-BEI inikeza ukunakekelwa kwengane ngesikhathi sekilasi, ukuze umama nobaba bakwazi ukuqhubeka nokufunda isiNgisi izingane zinakekelwa.
I-BEI ingaba ngumhlinzeki wakho wezilimi, kepha bewazi ukuthi singakusiza ekutholeni ezinye izinsiza emphakathini? Njengomfundi e-BEI, uyingxenye yenethiwekhi enkulu yokusekelwa. Unganqikazi ukusibuza imibuzo. Singakudlulisela kwabanye abahlinzeki Benkonzo Yezimbangi ukuthola ukusekelwa kwemisebenzi, izidingo zezindlu, ukulungiswa kwe-GED, njll. Sakhe futhi iminyaka yokuxhumana komphakathi. Qiniseka ukuthi uhlangana noMeluleki wabafundi we-BEI ukuze ufunde kabanzi.
Sonke singabafundi bezilimi futhi siyazi ukuthi kunjani ukuba ngumfundi wokuqala. Ezikhathini lapho zidingeka, abasebenzi bethu abahlukahlukene nobungcweti bangakusiza ngolimi lwakho lwendabuko. Sisekelwa ngolimi ngesi-Arabhu, isiChinese, isiFarsi, isiFulentshi, isiHindi, isiJalimane, isiGujarati, isiJapane, isiKazakh, isiKinyarwanda, isiKirundi, isiKorea, isiKurdish, isiPhuthukezi, isiPhuthukezi, isiRomania, isiRussia, iSerbo-Croatia, isiPedi, iSpanish, isiSwahili, isiTagalog , IsiTurkey, isi-Urdu, isiVietnam, nesiYoruba.
Uma ufudukela edolobheni elisha, kwesinye isikhathi kuthatha isikhashana ukufunda imigwaqo futhi ukwazi ukubona kahle. Ngenxa yalokhu, sinikeza iningi lamakilasi ethu eduze kwekhaya lakho, endaweni okulula ukuhamba kuyo. Uma ukhululekile ezokuhamba zomphakathi, ungakwazi ukuthatha ikilasi ekhampasi lethu. Amathokheni ebhasi ayatholakala abafundi ukuthi beze e-BEI, njengoba kudingeka.
Ukufaka isicelo sobuzwe base-US?
I-BEI isiza ukubhekisa amaklayenti afanelekayo wezifundo zamahhala zokuba yisakhamuzi sase-US nge-CCT Houston.
Amakilasi ezabafundi besiNgisi futhi agxila ekulungiseleleni abafundi inhlolokhono ye-Naturalization, i-English ne-US Civics / History test. Prakthiza inhlolokhono, isivivinyo, futhi ufunde isiNgisi esidingekayo ukuphumelela. Abahlanganyeli abaphumelelayo bathola nokuthola usizo lwezomthetho nokumelwa kwenqubo yabo yokwenza ubuciko obuvela kuma-charity ama Katolika.
Cela ulwazi olwengeziwe ku-Citizenship Prep Course
Sicela uthayiphe 2 ukuze sazi ukuthi ungokoqobo
Inkambu yokufunda isiNgisi uLimi iyinkambu yomhlaba wonke enamathuba wokusebenza namasiko ahlukahlukene ekhaya noma uhambe umhlaba ufundisa futhi uhlangane nabantu abasha. Noma ngabe unentshisekelo yokufundisa ekhaya noma ukuhambela phesheya, i-BEI ingakusiza ngoqeqesho oludingekayo ukuze ube nguThisha wolimi lwesiNgisi oqeqeshiwe.
Uhlelo lwethu lokufundisa ngokuzinikela lothisha abazinikelayo lwenzelwe ukusiza abavoti ukuba babe othisha abaphumelele bolimi lwesiNgisi ngokunikeza:
Amathiphu ayisisekelo kanye namasu wokufundiswa okusebenzayo kwesiNgisi.
Izindlela zokufundisa ukwenza abafundi babo bonke ubudala namazinga.
Ukuphathwa kwamakilasi kanye namasu wokuhlela izifundo emazingeni ehlukene.
Izenzo zakamuva ku-EL Trends, Blended Learning, kanye namasu wokuxhumana nabantu.
Isipiliyoni somsebenzi esiwusizo sothisha abasha be-EL abanesifiso sokufundisa ekhaya nakwamanye amazwe.
Ngakho-ke uma ubheka umsebenzi wokufunda ulimi lwesiNgisi, udinga ukuqedela i-mazoezi yakho, noma ufuna ukuhamba nokusebenza embulungeni yonke, thintana ne-BEI ukuqala umsebenzi wakho we-EL.